China XY-4311G သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သောသတ္တုထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | Shuolong
XY-4311G- မျက်နှာစာအနေဖြင့်အသုံးပြုသောသတ္တုပြားသည်အလှဆင်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်သာမကနေ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်ဗိသုကာသတ္တုကွက်များ၏အဖွင့်areaရိယာကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
ပစ္စည်း: သံမဏိ & ကြေးနီ
အလေးချိန် - ၈.၅၄ kg / m2
ဖွင့်ပွဲAreaရိယာ - ၆၄.၅%
သင်၏စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်လျော်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ShuoLong သည်၎င်းသည်ရထားလမ်းဖြောင့်လားသို့မဟုတ်ကွေးသောရထားရှိမရှိဖြစ်စေ၎င်းကိုသင်နားလည်အောင်ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အထူမှာအနည်းဆုံး ၂ မီလီမီတာရှိပြီး၊ သင်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ သင်သံသယများကိုဖြေရန်ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောတပ်ဆင်မှုဗီဒီယိုကိုသင့်အားပေးမည်။
၁.၄၀ နှစ်အတွေ့အကြုံ: နှစ်ပေါင်း 40 ကျော်ဝါယာကြိုးကွက်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကို။
3. စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစတိုင်များအပြင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များကိုအဘို့အစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
4. အကောင်းဆုံးစျေး: အခြားကုမ္ပဏီများမှသင့်အားပေးသောမည်သည့်နမူနာသို့မဟုတ်မည်သည့်ကိုယ်စားပြုချက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကိုက်ညီမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောကတိကဝတ်ကိုအသုံးချရန်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစာတစ်စောင်ပို့ပေးပါ။ သူတို့၏စျေးနှုန်းကိုအနည်းဆုံး ၁၀% ဖြင့်ကျော်ဖြတ်ပါမည်။
သငျသညျအမှာစာချင်သို့မဟုတ်ငါတို့သတ္တုကွက်၏အသေးစိတျပိုသိလိုလျှင်, ငါတို့ website တွင်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ Wအီးသည် ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် XY-4356 သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်
နောက်တစ်ခု: အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာများအတွက် XY-4311 သတ္တုကွက်မျက်နှာပြင်
XY-A5016 Solar Shading Spiral ရှုပ်ထွေးသောသတ္တု
ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် XY-4356 သံမဏိဝါယာကြိုးကွက် ...